यदि मेरो बिरालो क्रुर छ भने म के गर्ने? | Noti बिरालाहरू
यदि मेरो बिरालो क्रुर छ भने म के गर्ने?
मारिया जोस रोल्डन | | जिज्ञासा, रोगहरू
बिरालो, हामी जस्ता, तपाईं आफ्नो जीवन भर समय-समय मा कर्कश हुन सक्छ। यद्यपि यो धेरै सामान्य समस्या हैन, यो यस्तो हुन सक्छ कि एक दिन तपाईंको आवाजको अलि बदलियो। यदि हो भने हामीले यो किन पत्ता लगाउनु पर्छ किन कि उसलाई चिसो लागेको थियो वा धेरै गम्भीर अवस्थामा उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ।
यी कारणहरूको लागि, यदि हामी कहिल्यै सोच्दछौं यदि मेरो बिरालो क्रूर छ भने म के गर्नेयहाँ हामी हाम्रो प्रश्नको उत्तर भेट्टाउनेछौं 🙂
1 बिरालाहरुमा एफोनियाका कारणहरु के के हुन्?
2 कसरी थाहा पाउने कि मेरो बिरालो क्रूर छ?
3 तपाईंलाई मद्दत गर्न के गर्ने?
4 तपाईंको बिरालोमा आवाज परिवर्तनको अर्थ के हो?
5 सामान्य कारण किन तपाईंको बिरालाले आवाज परिवर्तन अनुभव गर्दछ
5.4 स्वत: प्रतिरक्षा सर्तहरू
5.5 मांसपेशी विकार
5.6 मनोवैज्ञानिक कारणहरू
5.7 अस्थायी आवाजको घाटा
5.8 माथिल्लो श्वासप्रणाली संक्रमण
5.10 Laryngeal पक्षाघात
5.12 नर्भ क्षति
बिरालाहरुमा एफोनियाका कारणहरु के के हुन्?
बिरालाहरूको स्वरयन्त्र हाम्रो लागि एकदम मिल्दोजुल्दो छ, र यसले समान तरिकाले काम गर्दछ (तर उस्तै छैन)। त्यस्तै गरी जब हामी चिसो, अत्यधिक चिच्याउँदा, खोकीले वा धेरै छिचोल्छौं, वा जस्तो रोग वा जलनजस्तो लाग्ने गर्छौं हाम्रो प्यारो साथीलाई पनि त्यस्तै हुन सक्छ.
यसलाई रोक्नको लागि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि उसलाई उच्च-गुणवत्ताको खाना दिनुहोस् (अन्न बिना) जसले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो राख्दछ, र चिसो दिनमा बाहिर जानबाट जोगिनुहोस्विशेष गरी यदि यो चिसो बिरालो छ कि आफूलाई बचाउन कम्बलको मुनि जान मनपर्दछ, किनभने तिनीहरू अधिक चाँडो चिसो पक्रने मानिस हुन्छन्।
कसरी थाहा पाउने कि मेरो बिरालो क्रूर छ?
जब बिरालाले आवाज सुन्न समस्या गर्दछ, हामी तुरून्तै यसलाई याद गर्नेछौं तिनीहरूको म्यावहरू अधिक तल्लो पिच, सास, र पनि हार्स बन्छन्। उसको भोटहरू छोटो हुन सक्छ किनकि उसले आफ्नो भ्वाइस बाकससँग समस्या भएको कारणले यो अरू कुनै तरिकाले गर्न सक्दैन।
यदि मामला गम्भीर छ भने, तपाईं अवाक् हुन सक्नुहुन्छ, कि, यो me meing को इरादा संग यसको मुख खोल्छ, तर यो कुनै आवाज गर्न सक्षम हुनेछ।
तपाईंलाई मद्दत गर्न के गर्ने?
यदि हामीसँग कपाल भूस छ भने, हामीले गर्नु पर्ने पहिलो र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा उसलाई पशु चिकित्सकमा लग्नु हो। हामीले उल्लेख गरिसकेका छौ, त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् किन तपाईं हर्से हुनुहुन्छ, र यसलाई सुधार गर्नको लागि तपाईंलाई एन्टिबायोटिक वा अन्य प्रकारका औषधिहरू आवश्यक पर्दछ जुन पेशेवरहरूले सिफारिस गर्न सक्छन्। पशुलाई कहिल्यै स्व-औषधी नदिनुहोस्ठिक छ, हामी तपाईंको जीवन खतरामा राख्न सक्छौं।
घरमा यो घरको बनाइएको कुखुराको ब्रोथ बनाउन र यसलाई तपाईंको खानामा थप्न सल्लाह दिइनेछ। तसर्थ, न्यानो तापक्रममा भएको खाना खाएर तपाईको घाँटी अझ राम्ररी निको हुनेछ।
तपाईंको बिरालोमा आवाज परिवर्तनको अर्थ के हो?
माथिको बाहेक, बिरालाहरूको आवाज पनि परिवर्तन हुन सक्छ र अन्य कारणहरूको लागि कर्कश पनि हुन सक्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि बिराला मालिकहरूले यसलाई ध्यानमा राख्नुहोस् ताकि तपाईं जति सक्दो चाँडो व्यावसायिक सहायता लिन सक्नुहुनेछ उनीहरूले उनीहरूको आवाजमा बिरालोमा केहि अनौंठो भइरहेको देख्दछन्।
जब उनीहरूले आफ्नो घरपालुवा जनावरमा आवाज परिवर्तन देख्छन्, प्राय जसो बिराला मालिकहरू शान्त रहन्छन्। जे भए पनि, सबैलाई नराम्रो चिसोको अनुभव भएको छ, जसको दौरानमा उनीहरूले आफ्नो आवाज पूर्ण रूपमा गुमाए। सामान्यतया तपाई यो कष्टदायक हो भन्ने सोच्नुहुन्छ, तर गम्भीर स्वास्थ्य समस्या होईन.
जबकि यो कथन मानिसहरुको लागी सही हुन सक्छ, बिचारहरुका लागि उही भन्न सकिदैन। वास्तवमा, बिरालाहरूमा आवाज परिवर्तनले सामान्यतया अन्तर्निहित स्वास्थ्य समस्यालाई संकेत गर्दछ, चिसो मात्र होइन। त्यसकारण तपाईंले यस समस्यालाई हल्का रूपमा लिनुहुन्न।
फ्लाइनेसको बारेमा थोरै कम ज्ञात तथ्य यो हो कि तिनीहरूको भोकल अद्वितीय छैन, यस अर्थमा तिनीहरूसँग अतिरिक्त झिल्ली, निलयको डोरी छ। यी भेन्ट्रिकुलर डोरीहरू प्राय प्युरिंगको लागि प्रयोग गरिन्छ। जब तपाईंको बिराला शुद्ध हुन्छ, यी "तारहरू" द्रुत दरमा कम्पन हुन्छ र विन्डपाइप पूर्ण रूपमा बन्द नगरी नै कम्पन हुन्छ।
सामान्य कारण किन तपाईंको बिरालाले आवाज परिवर्तन अनुभव गर्दछ
फ्वाइल्समा आवाज परिवर्तन वा एपोनियाले सामान्यतया यो संकेत गर्दछ कि प्रक्रियाको साथ यांत्रिक हस्तक्षेप छ वा भोकल डोरीसँग सम्बन्धित स्नायुहरूको उत्तेजनाको अभाव हुन सक्छ। पशु चिकित्सकहरूका अनुसार, श्वासप्रश्वासको संक्रमणले बिरालाहरूको आवाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ, तर यी धेरै दुर्लभ घटनाहरू हुन्। यस अवस्थाको लागि जिम्मेदार मेकानिकल र न्यूरोलॉजिकल हस्तक्षेपहरू समावेश गर्दछ:
यदि बिरालाले घाँटी क्षेत्रमा गम्भीर चोटपटक लाग्यो भने, यसले भोकल डोरीको कार्यमा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ। दिमागमा राख्नुहोस् कि घाँटी क्षेत्रमा सूजन पनी चोटपटकको कारणले हुदैन।
तपाईको बिरालोलाई तपाईको पछाडिको मैदानमा स्वतन्त्र रूपमा घुम्न अनुमति दिन पुनर्विचार गर्नु पर्ने कारण यो हो कि उनीहरूले समात्ने र खाने साना जनावरहरूको हड्डीहरूले टन्सिल, स्वरयंत्र वा घाँटीमा राख्न सक्छन् र सुन्निन सक्छ। साथै, भेडाहरूले झगडाको परिणाम स्वरूप फोहोर रिपोर्ट गर्दछ।
घातक र सौम्य ट्यूमरहरू स्वरयन्त्र र घाँटी क्षेत्रमा देखा पर्ने दबाब र भीड सामान्य टिशू प्रयोग गर्दछ। उही समयमा, प्राथमिक स्नायु ट्यूमरले भोकल डोरीहरूमा उत्तेजितको हानी निम्त्याउँछ। कहिलेकाँही, क्यान्सरयुक्त संरचनाहरू जुन घाँटीको वरपरका क्षेत्रहरूमा हुन्छन् लेरेन्क्सको स्नायुहरूलाई पिन्च गर्न र भोकल डोरीहरूलाई मौन पार्न सक्छ।
स्वत: प्रतिरक्षा सर्तहरू
मानव जत्तिकै, बिरालाको सेता रक्त कोशिकाहरू सक्रिय हुनसक्छन्, प्राय: स्वचालित प्रतिरक्षा स्थितिहरूमा सामान्य लक्षण। यदि यस्तो हुन्छ भने सेता रक्त कोषहरूले स्नायुमा आक्रमण गर्नेछ र क्षति पुर्याउँदछ, यसैले भोकल कर्ड र स्वरयन्त्रमा आवेग पठाउन तपाईंको क्षमता सीमित गर्दै.
यो हुन सक्छ कि तिनीहरूले सिद्धान्तमा फरक भूमिका खेल्छन्, तर धेरै घरपालुवा मालिकहरूले भोकल डोरीहरू वास्तवमै एक मांसपेशी हुन् भनेर महसुस गर्दैनन्। तसर्थ, यदि तपाईंको बिराला एक मांसपेशी डिसअर्डरबाट ग्रस्त छ भने, सर्त neuromuscular जंक्शन रोक्न र आवाज परिवर्तन वा नोक्सान पैदा गर्दछ.
यदि तपाईले भर्खर नयाँ घरमा जानुभएको छ भने तपाईको बिरालोले यसलाई प्रयोग गरिरहेको हुन सक्छ। कहिलेकाँही आगन्तुकहरू रात बस्न वा नयाँ फर्निचरको एक टन प्राप्त गर्नाले मियोइंगको अभाव हुन सक्छ।
छुट्टिएर चिन्ता पनि यस प्रकारको व्यवहारलाई ट्रिगर गर्न सक्दछयद्यपि यो उदास वा चिन्तित बिरालाहरूको लागि प्रायः मौन रहनुको सट्टा मौन रहनुको निम्ति सामान्य हो।
म्यासको अभावको लागि अर्को मनोवैज्ञानिक कारण म्याउहरूसँग बिरालोको व्यक्तिगत सम्बन्ध हो।। यदि पछिल्लो चोटि meow गर्न कोशिस गर्दा केहि दर्दनाक भयो भने, तपाईं उद्देश्यमा तपाईंको आवाज दबाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्ता पोस्ट-ट्रामाटिक व्यवहार प्राय: अन्य लक्षणहरूसँग आउँछन् जस्तै भूख न लाग्ने, सुस्ती, वा विनाशकारी व्यवहार।
अस्थायी आवाजको घाटा
मीनिंगको अभावको अर्को कारण आवाजको अस्थायी गुमाउनु हो। कन्सर्टमा तपाईले रातभर कराइरहेको बेला तपाईको आवाज गुमाउने तरिका जस्तै, तपाईको किट्टी पनि यस्तै प्रकारको केही चीज मार्फत जान सक्छ। अस्थायी रूपमा आवाज गुमाउनु त्रासको कारण होइन। तपाईंको बिराला केही दिनहरूमा सामान्य भोकललाईसको लागि फिर्ता हुनुपर्छ।
माथिल्लो श्वासप्रणाली संक्रमण
सामान्यतया स्वस्थ बिग्रेको नस्लहरूले उनीहरूको उमेरलाई विचार नगरी श्वासप्रश्वासको संक्रमण विकास गर्न सक्छ। बिरालाहरूमा सबैभन्दा धेरै माथिल्लो श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू बिरामी हर्पेज हो। चिसो, एलर्जी, क्यालसिभिरस, र अन्य समान श्वासप्रश्वास समस्याहरूले सजीलै मेउनिंगको अचानक घाटा निम्त्याउन सक्छ। यदि तपाईंलाई लाग्छ तपाईंको बिरालोलाई माथिल्लो श्वासप्रश्वास संक्रमण वा श्वासप्रश्वासको अवस्था छ भने, सकेसम्म चाँडो तपाईंको पशु चिकित्सकलाई कल गर्नुहोस्।
यदि तपाईं तपाईंको घरपालुवा जनावरलाई स्वतन्त्र रूपमा बाहिर घुम्न अनुमति दिनुहुन्छ भने, यसले अर्को संक्रमित जनावरको रेबीज समात्न सक्छ। रेबीजले प्रायः कर्कश आवाजको कारण यस्तो गर्दछ कि यस्तो लाग्न सक्छ कि बिरालोले भर्खरै आफ्नो मुख खोलेको छ बिना कुनै मीनिंग आवाज निकाल्दछ। यदि तपाईंको बिरालाको बच्चा एक पागल जनावरको वरिपरि भएको छ भने हल्का सम्भावना छ भने, तपाईंले यसलाई तुरन्त पशु चिकित्सकको कार्यालयमा लैजानु पर्छ।
Laryngeal पक्षाघात आवाज बाकस को एक dysfunction हो, सामान्यतया आवाज / बक्स को उमेर / गिरावट को कारण। यदि तपाईंको बिराला संग छ, तपाईंको भोकल डोरीले कुनै आवाज उत्पादन गर्दैन।
हाइपरथायरायडिजम एक स्वास्थ्य अराजक हो जुन ओभरएक्टिभ थाइरोइड ग्रंथिहरूको कारण हुन्छ। पुराना बिरालाहरूले आफ्ना युवा समकक्षहरू भन्दा बढि यसलाई विकसित गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। जबकि यो हुन्छ, बिरालाहरू आफ्नो म्याव गुमाउन यो सामान्य कारण होईन।
बिरालोको म्यानु हराएको अर्को सम्भावित कारण भ्वाइस बाकसलाई नियन्त्रण गर्ने स्नायुमा क्षति हो। यो गिरावट बाह्य कम्प्रेसन वा आन्तरिक आघातको कारण हुन सक्छ। क्षति प्राय: बाहिरी निकायहरू, जस्तै घाँस वा टहलका ब्लेडहरू, लेरीંજियल क्षेत्रमा हुन्छ।
फिलीन्समा आंशिक वा पूर्ण आवाज गुम्नका लागि जिम्मेवार कारणहरूको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै, हामी विश्वास गर्छौं कि यो समझदारीको रुपमा छ किन चाँडो हस्तक्षेप बिल्कुल अनिवार्य छ। केहि अपवादहरू सहित, प्रायः सर्तहरू जसले आवाज परिवर्तन गर्न अग्रसर गर्दछन् व्यवस्थित छन्। तसर्थ, यदि तपाईले देख्नुभयो कि तपाईको बिरालोले म्याऊ गुमाउँदै छ भने, जतिसक्दो चाँडो पशु चिकित्सकमा जान ढिलाइ नगर्नुहोस्.
र, निस्सन्देह, तपाईंले यसलाई न्यानो राख्नुपर्दछ र सबै भन्दा माथि, यसलाई धेरै प्रेम दिनुहोस् ताकि अलि अलि अलि यसले पुन: प्राप्ति गर्न सक्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Noti बिरालाहरू » बिरालाहरू » रोगहरू » यदि मेरो बिरालो क्रुर छ भने म के गर्ने?
बिरालोको आधा जीवन भनेको के हो?
कसरी थाहा पाउने मेरो बिरालो कत्ति ठूलो हुनेछ